Masinya lapho kuqala umsebenzi omusha, bonke abantu bangena kabusha, baqhubeka kanye Nami sibambene ngezandla, sihamba emgwaqweni obanzi wasembusweni sindawonye, kukhona futhi ukusondelana phakathi komuntu Nami. Ukukhombisa imizwa Yami, ukuveza isimo Sami sengqondo kumuntu, ngikhulumile njalo-njalo nomuntu. Ingxenye yala mazwi, nokho, kungenzeka ibalimaze abantu, nakuba amanye awo angase abe usizo olukhulu kubo, ngakho ngineseluleko kubantu ukuba balalelisise lokho okuvela emlonyeni Wami. Amazwi Ami angangabi ngahlabahlosile nacwengekile, kodwa ayikho konke okungamazwi aphuma phakathi enhliziyweni Yami. Ngenxa yokuthi umuntu wayengumngani Wami kwasekuqaleni, ngiqhubekile nokufeza umsebenzi Wami kumuntu, kanti umuntu, naye, wenza okusemandleni akhe ukubambisana Nami, esaba ngokujulile ukuwuphazamisa umsebenzi Wami. Kulesi sikhathi, inhliziyo Yami igcwele ukujabula, ngokuba ngitholile ingxenye yabantu, futhi ngalokho “ibhizinisi” Lami ngeke lisawa, alisewona amazwi angenalutho, “nelungelo lokumaketha” Lami alisasebenzi ngobuvila. Abantu banomqondo vele, bazimisele bonke “ukuzinikela ngokuzimisela” ngegama Lami kanye nangenkazimulo Yami, kanti ngale ndlela “ilungelo lomnyango” Wami lizuza “izimpahla” ezintsha, futhi ngalokho endaweni yomoya abaningi “abathengi” bayafika ukuzothenga “izimpahla.” Kungalesi sikhathi kuphela lapho ngithola khona inkazimulo, kungaleso sikhathi kuphela lapho amazwi akhulunywe ngumlomo Wami engabi angenalutho. Nginqobile, futhi ngibuyele ekunqobeni, futhi bonke abantu bayangibungaza. Ukukhombisa ukungithanda, ukukhombisa ukwamukela ngaphansi kwamadolo Ami, kulesi sikhathi udrako omkhulu obomvu uyafika “ukuzobungaza,” kanti ngiyakhanyizuliswa kulokhu. Kusukela ngesikhathi sokudala kuze kube namuhla, ngilwe izimpi eziningi zokunqoba, futhi ngenze izinto eziningi ezithandekayo. Abaningi abantu bake bangibungaza, bangipha udumo, bangidansela. Nakuba lezi kwakuyizikhathi ezinesiyaluyalu, futhi ezingekhohlakale, angikaze ngikuveze ukumamatheka Kwami, ngokuba kwakusafanele ukuba ngimnqobe umuntu, futhi ngangenza ingxenye yomsebenzi ofuze ukudala. Namuhla akufani nesikhathi esedlule. Nginikeza ukumamatheka esihlalweni sobukhosi, ngimqobile umuntu, futhi bonke abantu bayathoba phambi Kwami ukungidumisa. Abantu banamuhla akubona abangesikhathi esedlule. Kunini lapho umsebenzi Wami ungazange khona ube ngowesikhathi samanje? Kunini lapho ungazange khona ube ngowenkazimulo Yami? Ngenxa yekusasa okumele likhanye, ngizocacisa umsebenzi Wami wonke kumuntu izikhathi eziningi, ukuze yonke inkazimulo yami “ihlale” kumuntu, owadalwa. Ngizothatha lokhu njengesimiso somsebenzi Wami. Nina enizimisele ukubambisana Nami, phakamani nisebenze kanzima ukuze inkazimulo Yami eyengeziwe igcwalise umkhathi. Manje sekuyisikhathi sokwenza izinhlelo ezinkulu. Bonke labo abangaphansi kokunakekela nokuvikela kothando Lwami banethuba lokusebenzisa amakhono abo lapha, endaweni Yami, futhi ngizongenelela kuzo zonke izinto “ukuphendula” umsebenzi wami. Izinyoni ezindiza esibhakabhakeni ziyinkazimulo Yami esibhakabhakeni, izilwandle emhlabeni zingukwenza Kwami kwasemhlabeni, ukwengameleka kwazo zonke izinto kungubukhona Bami kuzo zonke izinto, ngifaka phansi Kwami konke okukhona emhlabeni njengemali yokuphatha Kwami, ngenza zonke izinto ukuba zande, zikhule, ziqhakaze ngokwempilo.
Okulandelayo: Isahluko 43